Terms uye Conditions pamusoro £ 1500 Tournament
Kukwidziridzwa Izvi anotomutiza 00:01 19fung May kusvikira wa25 May (GMT)
Kuti aitewo vatambi vanofanira kuchengetesa uye wager they kushoma pakati £ 10 panguva promotional nguva
Vakundi pachaiswa kuitira kubva kumusoro-soro kuti rakadzika novimba cheap car insurance yavo wagering.
The mibayiro chichange paakavapa seizvi:
1there – £ 500 Cash
2wana - 5th – £ 250 Cash
Chete wagering pamusoro mitambo slots inobatsira kurutivi Tournament.
Cash mibayiro rinogona kutora 3 kushanda mazuva kunzi kuchikwama chenyu.
Vakundi richatsikwa dzitaure naye playing zvakananga
General Terms uye Conditions kushandisa. Management mutongo wokupedzisira dzose nyaya.
Terms uye Conditions Mambokadzi wacho Birthday Tournament
Terms uye Conditions pamusoro Giveaway
Terms uye Conditions pamusoro Tour De France Network Promotion